iOS စုစည်းမှု : Myanmar Mobile Software Developer
Category: iOS စုစည်းမှု
Itune 11.2.0.114 Setup for 32bit !
ကဲ……. ” I Devices ” တွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဘော်ဒါတွေ အတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” I Tune ” Vesion လေးတင်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာ… ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ဘူးနော် ဒေါင်းလိုက်ပါအုန်းဗျာ……. Download ( I Tune ) Mediafire Link အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ….. [email protected]
iTool Setup 1.8.3.5 ! ( Chinease Version )
ကဲ…. ” Apple User ” တွေ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပြသနာတက်နေတဲ့ ” Unable To ascertain to compatibility the itune ” ဆိုလားမသိဘူးဗျာ…. အဲ့ကောင်လေးတက်လာပြီဆိုရင် သီချင်းတွေ သွင်းလို့ မရတော့ဘူးဗျာ… အဲ့ကောင်လေးကို ကျွန်တော်လည်းရှာရင်း ရှာရင်း နဲ့ တွေ့ ခဲ့တာလေးပါ ပြောတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ itune နဲ့ မကိုက်တာလို့ တော့ပြောတာပဲဗျ…. itune version old ပြန်သုံးဖို့ ကြတော့လည်း အဆင်မပြေပြန်ဘူးလေဗျာ… အာ့ကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ လိုက်ရှာလိုက်တော့ တရုတ်ဆိုက်မှာတင်ထားတာလေး တစ်ခုတွေ့ လိုက်လို့ အားလုံးကို ပြန်လည်ဝေမျှချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ပြောတာများနေပြီ ကြည့်လိုက်ပါအုန်းဗျာ…. […]
I phone & I pad firmware New !
ကဲ…အသစ်တွေကလည်းထွက်ရှိလာပြန်ပြီဗျာ… အားလုံးလည်း လိုချင်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ…. ဒီဗားရှင်းမှာတော့ ထောင်ဖောက်လို့ အဆင်မပြေသေဘူးလို့ တော့ပြောနေကြတယ်ဗျ ကျွန်တော်တော့ မစမ်းရသေးဘူးပေါ့ဗျာ… လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့သူတွေ အတွက်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ….:D ဒေါင်းလိုက်ကြပါအုန်းလို့ …. For I Phone —————- 7.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw 7.1.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw 7.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 7.1.0 (4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 7.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw 7.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw 7.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw 7.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw 7.1.0 (5s GSM): […]
Latest iphone & ipad Firmwares !
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” i Phone & i Pad ” Firmware လေးတွေ ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ….. i Phone Firmwares …………………………. 6.1.6 i Phone3Gs: ( i phone 2,1 6.1.6_10B500 Restore.ipsw ) 7.0.6 (4 GSM): ( iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw ) 7.0.6 (4 8GB): ( iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw ) 7.0.6 (4 CDMA): ( iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw ) 7.0.6 (4S): ( iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw ) 7.0.6 (5 GSM): […]
MMSD 1st Meeting And Data Sharing!
February 15, 2014 |5Replies
MMSD Data Sharing And Meeting ကျွှန်တော်တို့ MMSD ကနေ လုပ်တဲ့ ဒီပွဲလေးကို မည်သူမဆိုလက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးမှာ Firmware,App,Tool,Game တွေကို အခမဲ့ပေးသွားမှာပါ။ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလဲပါဝင်ပါတယ်။ Hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ Topic များကို လဲပြောပေးသွားအုံးမှာ။ လာရောက်သူများအစာပြေစားသောက်နိုင်ရန်လဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ မည့်သူမဆိုမအခမဲ့လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ပွဲလုပ်မဲ့နေရာကတော့ အမှတ် ၁၈၄-၁၈၆ ပထမထပ် ဟသာင်္တခန်းမ၊၄၅လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်လေးကျောင်းနောက် ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၁၆.၂.၂၀၁၄ (တနင်္ဂနွေနေ့) အချိန် – ၁၂နာရီ မှ ၃နာရီ
iOS7အတွက် Jailbreak ထွက်ပါပြီ
ထက်အောင်မိုး (ပျဉ်းမနားသား) |
December 23, 2013 |4Replies
ပိုစ့်ရေးသားသူ-ထက်အောင်မိုး(ပျဉ်းမနားသား) တကယ်ကို မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲခင်ဗျာ အားလုံးမျှော်လင့် စောင့်စားနေကြတဲ့ iOS7အတွက် JailBreak ကို Evasion အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ Christmas လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ iOS 7.0 ကနေ 7.04 အထိ iPhone , iPod , iPad အကုန်လုံး JailBreak လုပ်နုိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာ ကို လဲ Font profile မသွင်းဘဲနဲ့ iOS6က font သုံးပြီး အဆင်ပြေစွာဖတ်နိုင်ပါပြီ။ MMKeyboard ကတော့ Shift key feature သုံးပြီး နောက်တစ်မျက်နှာပြောင်းလို့မရသေးပါ။ သိပ်မကြာ ခင်တော့ Developer တွေ ပြင်ပေးတော့မှာပါ။ ဒီ မှာ Official […]
Myanmar iT Foundations (ပညာဒါနသင်တန်း)
December 4, 2013 | 14 Replies
Myanmar iT Foundations (ပညာဒါနသင်တန်း) သင်ကြားမည့် ဘာသာ ရပ်များ – iphone နှင့် Apple ဖုန်းများအတွက် Software အခြေံခံသင်တန်း – ဖုန်းအမျိုးမျိုးအတွက် အခြေခံ Hardware သင်တန်း – Computer Networking သင်တန်း – အလယ်တန်းကျောင်းသားများအတွက် Computer အခြေခံသင်တန်း အစရှိသည့် သင်တန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်တန်း ကို လူ ၂၀ သာ ကန့်သက်ထားသည်။ သင်တန်းကာလ သုံးလ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားသူမဲ့သူတွေကတော့ ၁။ ကိုသစ်ဆန်းခန့် ( Computer Basic) ၂။ ကိုဖြိုးချမ်း (Android အခြေံခံ) ၃။ ကိုနေလ (ဖုန်း Hardware အခြေံခံ) ၄။ […]
iOS Firmware ကိုModel နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီး Firmware ကိုခွဲခြားမယ်…(For iPad)
ကယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့iPad Userတွေအတွက်ဘယ်Firmwareကိုဒေါင်းရမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်…။ဒီပိုစ်လေးကိုတော့iPhone Hacksကပိုစ့်ကိုပြန်လည်မွန်းမံပြီးအသစ်ထွက်iDevicesများကို ထပ်မံ့ဖြည့်စွက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ….။Modelနံပါတ်ကိုတော့iPadရဲ့နောက်မှာပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ….။ အပေါ်ကပုံမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ပိုစ့်ရေးသားသူ-ထက်အောင်မိုး(ပျဉ်းမနားသား) Model Model Number Identifier iPad (Wi-Fi + 3G) A1337 iPad1,1 iPad (Wi-Fi) A1219 iPad1,1 iPad2A1395 iPad2,1 iPad2(GSM model) A1396 iPad2,2 iPad2(CDMA model) A1397 iPad2,3 iPad mini Wi-Fi A1432 iPad2,5 iPad mini Wi-Fi + Cellular A1454 iPad2,6 iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM) […]
iOS Firmware ကိုModel နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီး Firmware ကိုခွဲခြားမယ်…(For iPhone)
iPhone Firmware ကိုဒေါင်းတဲ့အခါမှာအချို့တက်သစ်စiOS Userတွေအတွက်ကောအချို့မသိသေးတဲ့လူ တွေအတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးဒီပိုစ်လေးကိုရေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်…။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြုံဖူးခဲ့ပါတယ်… ဘယ်Modelကဘယ်Firmwareကိုဒေါင်းရမှန်းကိုစသိအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။အခုတော့အဲဒီအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဒီပိုစ့်လေးကိုရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်….iPad များအတွက်ကိုလည်းမကြာမှီအချိန်မှာတင် ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ…။ဒီပိုစ့်လေးကိုတော့iPhoneHacksကပိုစ့်လေးကိုပြန်လည်ပြင်စင်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်ပါ တယ်။။။။ပိုစ့်ရေးသားသူ-ထက်အောင်မိုး(ပျဉ်းမနားသား) Generation Model Variant Identifier iPhone 2G A1203 GSM iPhone1,1 iPhone 3G A1241 GSM iPhone1,2 A1324 GSM iPhone1,2 iPhone 3GS A1303 GSM iPhone2,1 A1325 GSM iPhone2,1 iPhone4A1332 GSM iPhone3,1 ? GSM Rev A iPhone3,2 A1349 CDMA iPhone3,3 iPhone 4S A1387 GSM+CDMA iPhone4,1 A1431 GSM+CDMA […]